Qaramada midoobay oo ku baaqday in loo gargaaro dadka ku barakacay dagaalada dalka suuriya. – The Voice of Northeastern Kenya
Qaramada midoobay oo ku baaqday in loo gargaaro dadka ku barakacay dagaalada dalka suuriya.
Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha baniaadanimada Stephen O’Brien ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay u sheegay in dad badan oo ku barakacay dagaalada suuriya ay qarka u saaranyihiin xaalad baniaadanimo oo daran sidaas awgeedna loo baahanyahay in loo gargaaro.
Dagaaladan ayaa si gaar ah uy saameyay shacabka ku dhaqan magaalada Aleppo ee wadankaasi.
Hadalka ergeyga ayaa kus oo begmaya iyada oo shalay ugu yaraan 45 qof oo rayid ah oo ay 7 ka mid ah caruur yihiin la dilay iyaga oo ka cararaya howlgalo ay ciidamada amaanka ka wadaan bariga Aleppo oo ay falaagada gacanta ka taliyaan.
Hay’ada laanqeerta cas ayaa sheegtay in dad ka badan 20,000 oo qof ay bariga magaalada Aleppo isaga carareen seddexdii maalmood ee ugu dambeyay halka ciidamada suuriya ay gudaha usii galayaan degaanadaasi.
Ergeyga ayaa xusay in ay labada dhinacba ugu baaqayaan in anan lagu xadgudbin xuquuqda shacabka halka hadii xaalada anan wax laga qabanin ay goobta isu bedel karto qubuur sida uu hadalka u dhigay.
Bariga magaalada Aleppo oo ay ku noolyihiin 250,000 oo qof ayaa waxaa tan iyo sanadii 2012-ka gacanta ku hayay falaagada suuriya.
Ciidamada dalka suuriya oo garab ka helaya Ruushka ayaa afartii bilood ee ugu dambeyay wado howlgal lagu doonayo in lagula wareego gacan ku haynta magaalada Aleppo.
← Baarlamaanka wadanka Colombia oo ansixiyay heshiis nabadeed oo ay dowlada la geleyso falaagada FARC
Ardaygii natiijada KCPE-da ugu horeyay countiga Garissa oo helay buundo dhan 430 →